DASTUURKA XISBIGA KULMIYE Qoristii iyo Habaynta Garyaqaan Muuse Yuusuf
saveSave DASTUURKA XISBIGA KULMIYE.doc For Later
KULMIYE Waa urur siyaasadeed waddani ah oo la asaasay bishii May ee sannadkii 2002.
Xisbiga KULMIYE wuxuu bishii Diisa bar ee 2002 ku guulays!ay kaalin!a labaad ee !ar!ankii doorashooyinkii degaa da "a huuriyadda #o aliland !aasoo uu kaga id no$day saddexda xisbi ee $aran ee shar%iga ah. U&eedooyinka ururkani Waa $aar si dhab ah uga !ur&u aya hi ilooyinka dadweynaha reer #o aalilaand higsanayo 'as(ira!ions o) !he (eo(le o) #o aliland*+ kuwaas oo salka ku haya !aariikhda halga adii dheeraa ee loo soo aray xorni ada dalka+ hadday !ahay !ii is!i% aarka la iskaga xoreeyey+ iyo hadday !ahay halgankii $adhaadhaa ee lala galay !aliskii Maxa ed #iyaad ,arre+ halgankaas oo idhihiisu yihiin xasilloonida iyo degenaashaha aynu aan!a hadhsanayno arka la barbar dhigo $alalaasaha ka !aagan wixii #oo aaliya la isku odhan &iray in!eeda kale. Ka sokow dadaalka adaxda iyo xubnaha ururku u galeen dhis aha ururka waxa aan la iloobi karin !aageerada balaadhan ee dhina%walba leh ee ururku ka helay sha%biweynaha #o aliland !aaso xisbiga KULMIYE u suur!o gelisay inuu gaadho guulo waawayn uddadii gaabnayd ee uu dhisnaa. Xisbiga KULMIYE si u !aaba geliyo hanka sha%biga reer #o aliland waxa laga a aar aan ah inuu helo !aageradooda oo aan kala go- lahayn. Waxa shara) noo ah uwaadin kas!a oo #o aliland u dhashay inaanu ku ar!i $aadno XU,I.IM/D/ ururka anaga oo &e%el in aad arka hore akhrisa!aan M/.I0E#1/D/ xisbiga D/#1UU2K/ XI#,I3/ KULMIYE
QAYBTA KOOWAAD 1ILM//M/4/ IY5 XU,I.IM/D/ XI#,I3/
QODOBKA 1AAD M/3/6/ IY5 #I0/4/ XI#,I3/
7. Maga%a Xisbigu waa 8KULMIYE9
2. Kul iye waa xisbi u !aagan Midni ada iyo 4oru arin!a #o aliland.
/s!aan!a xisbigu waxay ka kooban !ahay laba ga% ood oo isa salaa aya+ oo idina xidhan !ahay shuudh %ad+ idina xidhan !ahay shuudh adow+ oo ay dusha kaga $oran !ahay 8KULMIYE9 oo ay dusha kaga wareegsan !ahay goob $aab uku eed leh oo khad adow ku $oran.
QODOBKA 3AAD 6/L/.K/ XI#,I3/
6alanka xisbiga Kul iye waa a)ar gees u $eybsan laba saddex xagal oo sare doogo yahay+ ka hoosena huruud yahay.
QODOBKA 4AAD X/2U.1/ D4EXE EE XI#,I3/
7. Xarun!a dhexe ee xisbiga KULMIYE waa agaalo adaxda "a huuriyadda #o aliland ee 4argeysa 2. Xisbiga KULMIYE waxa uu xaru o ku yeelanayaa agaalo adaxyada gobolada+ waxa kale oo uu laa o ku yeelanayaa deg ooyinka dalka :. Xisbigu waxa uu laa o ku yeelan karaa dalka dibediisa.
QODOBKA 5AAD U"EED55YI.K/ XI#,I3/
U&eedooyinka xisbiga waxa saldhig u ah barnaa i&ka xisbiga oo ay ka
7. Xoo&in!a+ barashada iyo ku dha$anka diin!a islaa ka 2. 4irgelin!a iyo ku dha$anka nidaa ka di o$raadiyada ee ku dhisan xoriyaadka iyo xu$uu$da asaasiga ee $o)ka iyo uwaadinka :. 4irgelin!a iyo ku dha$anka das!urka "#L+ shuruu%da dalka+ heshiisyada %aala iga ah iyo kuwa gobolada ee #o aliland dhina% ka !ahay a ase saaraysaa waa&ibaad dawli ah
<. I%!iraa) u raadin!a &a huuriyadda #o aliland =. /dkayn!a nabada iyo wada&irka bulshada iyo isku xidhka gobolada dalka oo dhan >. Di)aa%a &iri!aanka iyo adaxbanaanida &a huuriyadda #o aliland ?. 4irgelin!a sinaan iyo %adaalad buuxda+ ee u&!a a%a dhexdiisa iyo garsoorka hor!iisa @. 4igelin!a dha$ankeena suuban iyo la dagaalanka dha$a ada xun xun A. KorBuB$aadida dha$aalaha dalka iyo ka )aa-iidaysiga khayraadka ku &ira+ iyadoo la dhiirigelinayo aalgelin!a gaarka ah iyo suu$a xor!a ah 70. KorBuB$aadis!a arri aha bulshada sida waxbarashada+ %aa)i aadka+ garsoorka+ )anka iyo isboor!iga iw 77. Xoo&in!a xidhiidhka dalalka aynu deriska nahay iyo ururada dawliga ah ee aynu xubin!a ka nahay+ a a aynu higsanayno in aynu xubin ka no$ono.
QODOBKA 6AAD D/,EE6/DD/ XI#,I3/
7. Xisbigu waa xisbi siyaasi ah 2. Xisbigu waa xisbi di o$raadi ah oo aa insan a)kaar!a iyo di o$raadiyada ee aan ka hor i anayn sharee%ada islaa ka.
abaad-iida ku salaysan
QODOBKA 7AAD LUUC/DD/ XI#,I3/
7. 0adhiyada iyo aa ulka xisbiga+ waxa xisbigu adeegsanayaa luu$ada a)B #oo aaliga 2. Waxa la adeegsan karaa luu$adaha a)ka shisheeye arkii loo baahdo.
QODOBKA 8AAD D4/C//L/4/ XI#,I3/
7. Xisbiga waxaa dha$aale u ah; a. 3aadhaanka &oog!ada ah ee bil kas!a laga $aado xubnaha xisbiga b. Kharashka diiwaangelin!a xubini ada xisbiga %. 1aageerada dha$aale ee xubnaha xisbiga ee dibedda d. Dee$ ay bixiyaan sha$siyaadD ururoD hay-adoD shirkado a akaal o dha$aale oo
xukuu adda #o aliland si si an u siiso axsaab!a %. WaxBsooBsaarka kas!a ee xisbigu la yi aado 2. Dha$aalaha a a han!ida ku soo xeroo!ay si)ahaas xubin!a hore !il aan!ay+ waa han!ida xisbiga ana no$on kar!o han!i gaar ahaaneed.
QODOBKA 9AAD XU,I.IM/DD/ XI#,I3/
7. Waxa xubin ka no$on kara xisbiga $o) kas!a oo uwaadin #o aliland ah oo dalka gudihiisa a a dibediisa ku nool ee buuxiya shuruudaha soo so%da; a. Waa inuu $aangaadh yahay+ si waa)a$san shuruudaha doorashooyinka b. Waa inuu aa insan yahay xeerka iyo barnaa i&ka Xisbiga.
QODOBKA 10AAD /C,/L//D/ XU,I.IM/D/ XI#,I3/
7. Co) kas!a oo buuxiya shuruudaha Codobka sagaalaad+ waxa xubini adiisa ansixinaya guddiga laan!a xisbiga+ waxaana la siinayaa a$oonsi leh as!aan!ii xisbiga.
QODOBKA 11AAD XUCUUCD/ XU,I.1/
Xubin kas!a waxay xa$ u leedahay; 7. Ka $eybgalka kula ada a a shirarka laa aha xisbiga ee dalka guduhiisa a a dibediisa ee uu ka !irsan yahay 2. Inuu wax door!o a a la door!o+ waxa loo aga%aabi karaa dere&o kas!a iyo guddi kas!a oo xisbiga ah :. Wuxuu ergo ahaan uga $eybgeli karaa shirweyne $aran+ hadii laan!a uu ka !irsan yahay u soo eg a!o xilkaas <. wuxuu !alooyin u soo &eedin karaa laa aha xisbiga ee dalka gudihiisa a a dibediisa a a golayaashiisa =. Wuxuu xa$ u leeyahay in lagu wargeliyo siyaasada iyo wax$abadka xisbiga
>. Xubin loo door!ay golayaasha xisbiga a a gudiyadiisa+ looga a saari karo si)e ka duwan id das!uurku &ideeyey.
QODOBKA 12AAD W//"I,//DK/ XU,I.1/
Waxa saran xubin kas!a oo xisbiga ka !irsan waa&ibaadka soo so%da; 7. Waa inuu dhowraa barnaa i&ka iyo das!uurka xisbiga 2. Waa inuu si )ir)ir%oon uga $eyb$aa!aa siyaasada xisbiga ee laan!a uu ka !irsan yahay iyo hawlaha guud ee xisbiga :. Waa inuu !aageeraa go-aa ada goloyaasha iyo gudiyadda xisbiga <. Waa inuu ka dheeraado $abyaalada iyo wax kas!a oo kala )ogeeya u adda =. Waa inuu dhowraa nidaa ka kala danbeyn!a ee hogaanka xisbiga >. Waa inuu dhowraa shara)!a iyo karaa adda xisbiga ?. Waa inuu bixiyaa $aadhaanka xisbiga.
QODOBKA 13AAD 1//3EE2/Y//#4/ XI#,I3/
7. Xisbigu wuxuu lahaanayaa !aageerayaal+ kuwaasoo loola &eedo $o) kas!a oo aan xubin ka ahayn xisbiga+ hase yeeshee !aageersan barnaa i&ka iyo a)kaar!a xisbiga.
QEYBTA LABAAD C//,BD4I#MEEDK/ XI#,I3/
QODOBKA 14AAD C//,BD4I#MEEDK/ XI#,I3/
7. CaabBdhis eedka xisbigu wuxuu ka kooban yahay;
7.7. #hirweynaha xisbiga ee heer $aranD oo uu hoos yi aado; a. 3olaha dhexe ee xisbiga+ iyo b. 3uddigiisa )ulin!aBgolaha dhexe
7.2. #hirka xisbiga ee heer gobol oo uu hoos yi aado;
a. 3uddiga xisbiga ee gobolka iyo b. 3udidiisa )ulin!u
7.:. #hirka xisbiga ee heer deg o oo uu hoos yi aado; a. 3uddiga xisbiga ee deg ada iyo b. 3udigiisa )ulin!u
7.<. #hirka laan!a ee xisbigaD oo uu hoos yi aado;
a. 3uddiga xisbiga ee laan!a iyo b. 3uddiga )ulin!a
2. Kala horeyn!a hay-adaha ee kor ku !il aa ani wuxuu awoodaha ee xisbiga.
uu&inayaa kala sareyn!ooda
QODOBKA 15AAD D4I#M/4/ XI#,I3/ EE 4EE2 C/2/.
7. #hirweynaha heer $aran ee xisbigu waa hay-ada ugu sareysa ee xisbiga+ waxaana ku kul a ergooyinka ka so%da gobolada dalka iyo dibediisa 2. #hirweynaha waxa la $abanayaa shan!ii sannadoodba hal ar :. #hirweynaha waxa $aban$aabinaya guddiga )ulin!a ee golaha dhexe <. 1irada ergooyinka shirweynaha xisbiga waxa go-aa inaya golaha dhexe+oo ay ku &iraan;
a. 1irada xubnaha golaha dhexe ee xisbiga b. Xubno ay soo xushaan garabka haweenka iyo garab dhalinyarada ee xisbiga heer $aran %. Dha aan xubnaha xisbiga ee ku &ira golayaasha $aranka d. Ergooyinka ka so%da laa aha xisbiga =. Marka laga reebo xubnaha golaha dhexe !irada ergooyinka shirweynaha xisbigu waa inaysan ka yaraan !irada xubnaha golaha dhexe ee xisbiga.
QODOBKA 16AAD 0/D4I3/ U3U 452EEY/ EE #4I2WEY./4/ XI#,I3/
7. 0adhiga ugu horeeya ee shirweynaha waxa lagu dooranayaa shirgudoonka shirweynaha oo ka kooban gudoo iyaha shirweynaha+ gudoo iye ku xigeenka koowaad iyo ka labaad iyo xoghayn!a shirweynaha.
QODOBKA 17AAD /W55D/4/ #4I2WEY./4/
#hirweynaha xisbigu wuxuu leeyahay awoodaha soo so%da; 7. /nsaxin!a iyo waxBkaBbedelka das!uurka xisbiga 2. /nsaxin!a iyo waxBkaBbedelka barnaa i&ka xisbiga :. Doorashada hogaanka xisbiga oo ka kooban; gudoo iyaha iyo gudoo iyeBku xigeenada koowaad iyo labaad ee xisbiga <. Doorashada xubnaha golaha dhexe ee xisbiga =. 3o-aa in!a siyaasada iyo $orshayaasha guud ee xisbiga >. WaxBkaBbedelka a a baabi-in!a go-aanada iyo xeerarka golaha dhexe.
QODOBKA 18AAD C//,K/ D552/#4/D/ 3UD55MIY/4/ /M/ 3UD55MIYE XI3EE./D/ XI#,I3/
7. Doorashada gudoo iyaha a a gudoo iyeBkuBxigeenada xisbiga waxa shirweynuhu ku ansixinayaa usharaxa hela a$labiyad buuxda 'kala badh in ka badan !irada guud ee ergooyinka*
2. 4adii usharixiin!a idkoodna heli waayo a$labiyada ku xusan xubin!a hore ee $odobkan+ wareega labaad waxa usharixiin u ah labada usharax ee ugu %odka badan wareega koowaad :. Wareega labaad waxuu shirweynuhu ku ansixinayaa usharaxa ugu a$labiyadda badan !irada ergooyinka.
QODOBKA 19AAD /W55D/4/ 3UD55MIY/4/ XI#,I3/
7. 3udoo iyaha xisbigu waa adaxa iyo hogaanka guud ee xisbiga+ wuxuuna xisbiga ku leeyahay awoodaha soo so%da; a. Waa gudoo iyaha golaha dhexe iyo guddiga )ulin!a b. Isagoo ka !il aan $aadanaya go-aanada shirweynahaD kuwa golaha dhexe iyo go-aanada guddiga )ulin!a wuxuu &iheeyaa dha aan hawlaha xisbiga iyo siyaasada guud ee xisbiga %. Wuxuu asuul ka yahay han!ida xisbigaD wuxuu dalban karaa han!idhowre ar kas!oo loo baahdoD ka dib arkay sidaas go-aa iyaan guddiga )ulin!u d. Wuxuu awood u leeyahay aga%aabidda iyo xil ka $aadis!a sha$aalaha xarun!a dhexe e. Wuxuu aga%a xisbiga u e!elayaa heshiisyada xisbigu la gelayo Dhina%yo kale ). Wuxuu leeyahay dha aan awoodaha kale ee uu siinayo das!uurkanD xeerarka iyo xeerB hoosaadyada golaha dhexe.
QODOBKA 20AAD XILK/ 3UD55MIYEBKUBXI3EE./D/ XI#,I3/
7. 3udoo iyeBkuBxigeenada xisbigu waxay ka kaalinayaan gudoo iyaha hawlaha xisbiga 2. Waxay )ulinayaan wixii hawlo ah ee gudoo iyahu u ig ado :. 4adii uu gudoo iyahu dalka ka a$an yahay+ waxa si ku eelBgaadh ah kaalin!a gudoo iye u buuxinaaya gudoo iyeBkuBxigeenka 7aad <. 4adii ay gudoo iyaha iyo ku xigeenka 7aad a$an yihiin waxa kaalin!ooda si ku eel gaadh ah u sii buuxinaaya gudoo iye ku xigeenka 2aad.
,/.//.//.1/ "/3/D/ 3UD55MIYE /M/ 3UD55MIYE XI3EE./D/ XI#,I3/
7. In!a u dhaxeysa labada shirweyne hadii ay la soo deris!o gudoo iyaha xisbiga xaaladaha soo so%da;
a. Uu %aa)i aad daro awgeed hawshiisa u gudan waayo b. Uu isB%asilo oo ay golaha dhexe kaga a$balaan a$labiyad buuxda %. Uu geeriyoodo d. / a xukun axka adeed %i$aab ah oo ka a danbays ah xabsi loo diro. Waxa xilkii gudoo iyaha la wareegaya in!a la gaadhayo shirweynaha+ gudoo iye ku xigeenka 7aad ee xisbiga+ iyadoo gudoo iye ku xigeenka 2aad ee xisbiguna uu buuxinaayo kaalin!a gudoo iye ku xigeenka 7aad ee xisbiga
2. Isla xaaladaas gudoo iyaha xisbigu wuxuu xubin ka !irsan golaha dhexe ee xisbiga u aga%aabayaa gudoo iye ku xigeenka 2aad ee xisbiga+ iyadoo golaha dhexe ku ansixin doono a$labiyad buuxda+ hadiise laga diido ansaxin!a xubin!aas+ wuxuu aga%aabayaa xubin kale ilaa laga helaayo xubin la ansixiyo :. 4adii in!a u dhaxeysa labada shirweyne ay lasoo deris!o gudoo iye ku xigeenka 7aad ee xisbiga a a gudoo iye ku xigeenka 2aad ee xisbiga xaaladaha ku xusan xubin!a 7aad ee $odobkanD waxa la raa%ayaa habraa%a ku !il aa an isla xubin!a 7aad iyo 2aad ee $odobkan
<. 4adii gudoo iyaha iyo gudoo iye ku xigeenada xisbiga isku ar ay la soo deris!o xaaladaha ku !il aa an xubin!a koowaad ee $odobkan+ guddiga )ulin!u wuxuu shir aan %aadi ahayn iskugu yeedhayaa golaha dhexe si loo $aban$aabiyo shirweyne aan %aadi ahayn+ waxaana hogaanka xisbiga si ku eelgaadh ah u sii $abanaaya xoghayaha guud ee xisbiga.
QODOBKA 22AAD 35L/4/ D4EXE EE XI#,I3/
7. 3olaha dhexe ee xisbigu waa hay-ada hagaysa hawlaha xisbiga in!a u dhaxeysa labada shirweyneD wuxuuna ka kooban yahay 7:: 'bo$ol soddon iyo saddex* xubnood oo ay ku &iraan;
a. 3udoo iyaha xisbiga+ iyo $o) kas!a oo hore loogu door!ay gudoo iyaha xisbiga b. Labada gudoo iye ku xigeen ee xisbiga %. 3udoo iyeyaasha guddiyadda xisbiga ee goboladda d. 3udoo iyaha garabka haweenka ee xisbiga+ heer $aran =. 3udoo iyaha garabka dhalinyarada xisbiga ee heer $aan e. 70 xubnood oo gudoo iyuhu aga%aabo arka la soo dha ays!iro !irada guud ee xubnaha golaha dhexe iyadoo loo eegayo kaalin!a )ir)ir%oon ee ay ka $aadaan karaan hawlaha golaha dhexe ee xisbiga
2. Dha aan xubnaha kale ee golaha dhexewaxa dooranaya shirweynaha
:. 3olaha dhexe wuxuu lahaanayaa xubno kayd ah oo !iradoodu !ahay 70 xubnood oo aan ku &irin !irada guud ee xubnaha golaha dhexe+ kuwaasoo gudoo iyaha xisbigu u aga%aabo hadii xubin golaha dhexe banaanaa!o.
QODOBKA 23AAD M/#UULIY/DD/ IY5 /W55D/4/ 35L/4/ D4EXE
7. Marka laga reebo awoodaha kale ee das!uurkan a a go-aanada shirweynaha xisbigu siiyeen+ golaha dhexe wuxuu leeyahay awoodaha soo so%da; a. Wuxuu ansixiyaa iisaaniyada sannadka ee xisbiga b. Wuxuuu go-aan ka soo saaraa warbixinada ay sannadkiiba ar soo bandhigaan gudoo iyaha xisbiga+ xoghayaha guud ee xisbiga+ la%aghayaha iyo adaxda guddiyada kala duwan ee golaha dhexe ee xisbiga ee la xidhiidha wax$abadka xisbiga %. Wuxuu )uliyaa go-aanada shirweynaha $aranka d. Wuxuu ansixiyaa xeerarka xisbiga ee ay soo diyaariyeen guddiga )ulin!a ee lagu dha$an gelinayo hawlaha xisbiga e. Wuxuu wax ka bedeli karaa a a baabi-in karaa go-aanada guddiga )ulin!a ). Wuxuu ansixiyaa xeer hoosaadyada golaha dhexe g. Wuxuu awood u leeyahay aga%aabis!a iyo xil ka $aadis!a xoghayaha guud ee xisbiga h. Wuxuu awood u leeyahay aga%aabis!a iyo xil ka $aadis!a la%aghayaha xisbiga i. Wuxuu awood u leeyahay aga%aabis!a iyo xil ka $aadis!a adaxa guddiyada kala duwan ee golaha dhexe iyo xubnahooda &. Maga%aabis!a iyo xil ka $aadis!a 7< ka xubnood oo ka !irsan gudiga )ulin!a k. Wuxuu xubnaha golaha dhexe ka door!aa usharixiin!a doorashada adaxweynaha iyo adaxweyne ku xigeenada l. Wuxuu xunaha xisbiga ka door!aa usharixiin!a doorashada golayaasha baarla aanka . /nsaxin!a laa aha xisbiga n. Wuxuu ku dhawaa$i karaa shirweyne xisbi oo aan %aadi ahayn
2. In!a u dhaxeysa labada shirweyne xisbi ee heer $aranD baahi &ir!a oo laga a aar aan ah awgeed+ 3olaha dhexe ee xisbigu wuxuu awood u leeyahay inuu waxB kaBbedel ku sa eeyo das!uurkan si dan!a guud ee ururkaExisbiga waa)a$san Xaaladaha waxBkaBbedelka das!uurkan waxa lagu ansixinayaa 2E: 'saddex eelood oo laba* !irada guud ee 3olaha dhexe
C5D5,K/ 2<//D #4I2 3UD55.K/ 35L/4/ D4EXE
7. #hir gudoonla golaha dhexe wuxuu ka kooban yahay;
a. 3udoo iyaha xisbiga+ b. 3udoo iye ku xigeenka koowaad ee xisbiga %. 3udoo iye ku xigeenka labaad ee xisbiga d. Xoghayaha guud ee xisbiga
2. #hir gudoonku wuxuu soo hor dhigaa golaha a&endahaD wuxuu $aybiyaa doodaD wuxuuna gudoonshaa go-aanada.
QODOBKA 25AAD 0/D4IY/D/ 35L/4/ D4EXE
7. 0adhiyada golaha dhexe waa in la $ab!aa ugu yaraan sannadkiiba hal ar 2. 0adhiga golaha dhexe waxa iskugu yeedhi kara guddiga )ulin!a+ waxaana $aban$aabiya xoghayaha guud ee xisbiga :. 0adhiyada golaha dhexe waxa la $aban karaa arka la hel a$labiyad buuxda 8absolu!e a&ori!y9 8kala badh in ka badan !irada guud ee xubnaha golaha9 <. 0adhiga u horeeya ee golaha waxaa la $abanayaa !odobaad ka dib wa$!iga uu dha aado shirweynaha xisbiga + waxaana lagu ansixnaiyaa xeerBhoosaadka golaha dhexe =. Isla )adhigaas waxa lagu dooranayaa; a. Xoghayaha guud ee xisbiga b. La%aghayaha xisbiga.
QODOBKA 26AAD LUMI.1/ XU,I.IM/D/ 35L/4/ D4EXE
7. Co)ku wuxuu xubini adiisa golaha dhexe ku lu in karaa hadii; a. Uu geeriyoodo b. Xanuun u suuragelin waayo gudashada xilkiisa %. Is!i$aalad uu bixiyo golahuna ka ogolaado d. Uu xukun %i$aabeed oo ka a danbays ahi ku dha%o
2. Xaaladahaasi arkii ay !i aado+ shirgudoonku wuxuu xubnaha u horeeya ee liiska keydka ah u soo gudbinayaa golaha dhexe si loo ansixiyo.
QODOBKA 27AAD 3UDDIY/D/ XI#,I3/
7. 3olaha dhexe ee xisbigu wuxuu leeyahay guddiyo !iradoodu ka kooban !ahay < 'a)ar*+ oo kala aha; a. 3uddiga siyaasadda golaha dhexe b. 3uddiga abaabulka iyo war)aa)in!a golaha dhexe %. 3uddiga xidhiidhka laa aha xisbiga ee gobolada dalka d. 3uddiga xidhiidhka laa aha xisbiga ee dibedda
2. 3uddi kas!a wuxuu leeyahay adax :. Madaxa guddigu hadii uu a$an yahay a a ay la soo deris!o xaalad ka id ah xaaladaha ku xusan Codobka 2>aad+ waxaa kaalin!iisa si ku eel gaadh ah u sii haynaya xubin ka id ah guddiga uu adax ka yahay oo uu aga%aabo gudoo iyaha xisbigu <. Dha aan hawlaha gudddiyada kala duwani waxay hoos i anayaan guddiga )ulin!a =. 3uddi kas!a asuuliyadeeda iyo hawlaheeda waxa lagu !il aa i doonaa xeer hoosaadka golaha dhexe.
QODOBKA 28AAD 3UDDI3/ 0ULI.1/ EE 35L/4/ D4EXE
7. 3uddiga )ulin!u waxay so%odsiinyaa hawlaha &oog!ada ah ee xisbiga in!a uu kala a$an yahay golaha dhexe+ wuxuuna ka kooban yahay 2= xubnood oo kala ah; a. 3udoo iyaha xisbiga b. 3udoo iye ku xigeenka koowaad %. 3udoo iye ku xigeenka labaad d. Xoghayaha guud ee xisbiga e. La%aghayaha guud ee xisbiga ). Madaxa guddiga #iyaasadda g. Madaxa guddiga abaabulka iyo war)aa)in!a h. Madaxa guddiga xidhiidhka laa aha xisbiga ee gobolada dalka i. Madaxa guddiga xidhiidhka laa aha xisbiga ee dibedda &. Madaxa garabka haweenka k. Madaxa garabka dhalinyarada l. Iyo 7< '/)ar iyo 1oban* xubnood oo laga soo door!ay golaha dhexe
2. 1irada guddiga )ulin!a waxa ku biiraya arkas!a xubin kas!a oo hore loogu door!ay 3udoo iyaha xisbigaD isagoo ah xubin buuxda :. 3uddigu waa inuu kul aa ugu yaraan hal ar !odobaadkii <. Kula ada guddiga )ulin!a waxaa gudoonsha gudoo iyaha xisbiga.
QODOBKA 29AAD M/#UULIY/DD/ IY5 /W55D/4/ 3UDDI3/ 0ULI.1/
7. Marka laga reebo awoodaha das!uurkan+ xeerarka iyo go-aanada golaha dhexe siinayaan guddiga )ulin!a+ wuxuu guddigu leeyahay awoodaha soo so%da; a. Wuxuu soo diyaariyaa iisaaniyada xisbiga b. Wuxuu eel ariyaa go-aanda shirweynaha $aranka %. Wuxuu soo diyaariyaa xeerarka xisbiga d. Wuxuu soo diyaariyaa xeer hoosaadyada golaha dhexe e. Wuxuu soo saaraa go-aano lagu so%odsiiyo hawlaha xisbiga ). Wuxuu so%odsiiyaa hawl aal eedka golaha dhexe g. Wuxuu iskugu yeedi karaa golaha dhexe shir aan %aadi ahayn
2. 3uddiga )ulin!u wuxuu baahi &ir!a awgeed si ku eelgaadh ah u soo saari karaa xeerar a a xeerB hoosaadyo+ iyadoo laga ansixin doono golaha dhexe.
M/#UULIY/D/ X534/Y/4/ 3UUD
7. Marka laga reebo hawlaha kale ee das!uurkani u xilsaaray a a xeerBhoosaadka golaha dhexe+ xoghayaha guud waxay hawshiisu !ahay; a. Kaydin!a dha aan $oraalada shirweynaha $aran+ golaha dhexe iyo kuwa guddiga )ulin!a b. Wuxuu diyaariyaa a&endaha )adhiyada golaha dhexe iyo kula ada guddiga )ulin!a %. Wuxuu isku dubaridaa dha aan go-aanada golaha dhexe iyo kuwa guddiga )ulin!a d. Wuxuu isku dubaridaa xeerarka iyo xeer hoosaadyada golaha dhexe e. Wuxuu diyaariyaa warixinada golaha dhexe iyo kuwa guddiga )ulin!a
2. 4adii uu a$an yahay xoghayaha guud a a ay la soo deris!o xaalad ka id ah xaaladaha ku xusan Codobka 2>aad+ waxaa xilkiisa si ku eel gaadh ah u sii haynaya xubin ka !irsan guddiga )uin!a oo uu aga%aabo gudoo iyaha xisbiga.
QODOBKA 31AAD M/#UULIY/DD/ L/6/34/Y/4/
7. La%aghayaha xisbigu waa adaxa kaydin!a dha$aalaha iyo han!ida ururka 2. Wuxuu asuul ka yahay dha aan kharashyada baxa ee xisbiga+ isagoo xisaab %elin!iisa u gudbinaya guddiga )ulin!a+ warbixina siinaya golaha dhexe :. / arada kharash bixin!a iyo $aab xisaabeedka waxaa lagu soo saarayaa xeer hoosaadka golaha dhexe <. 4adii uu a$an yahay la%aghayuhu a a ay la soo deris!o xaalad ka id ah xaaladaha ku xusan Codobka 2>aad++ waxa xilkiisa si ku eel gaadh ah u sii haynaya xubin ka !irsan guddiga )ulin!a oo uu aga%aabo gudoo iyaha xisbiga.
QODOBKA 32AAD D552/#4/D/ 3UUD EE C/2/.K/ M/2K/ L55 EE35 D4I#M/4/ XI#,I3/
7. Doorashooyinka guud ee $aranka xubnaha ku guulays!ay ee ka id ah golaha dhexe ee xisbiga xilka xisbiga way sii haynayaan ilaa in!a laga gaadhayo shirweyne $aran 2. Doorashooyinkaas+ hadii !irada xubnaha xisbiga ee ku guulays!ay ay saa ayn xoog leh ku yeela!o dhis aha golaha dhexe ee xisbiga a a hogaanka xisbiga+ xaaladaas oo
kale gudiga )ulin!u isagoo $ii aynaya baahida &ir!a wuxuu iskugu yeedhayaa golaha dhexe )adhi aan %aadi ahayn si loo $aban$aabiyo shirweyne lagu soo dha ays!iro xubnahaas dhi an a a loo dhiso hogaanka xisbiga
QODOBKA 33AAD D4I#M/4/ XI#,I3/ EE 4EE2 35,5L
7. #hirka xisbiga ee heer gobol waa hay-ada ugu sareysa ee gobolka ee dhisaysa guddiga xisbiga ee heer gobol oo ka kooban <0 xubnood oo ay ku &iraan 3udoo iyaha iyo laba gudoo iye xigeen 2. #hirka xisbiga ee heer gobol waa in la $ab!aa labadii sanadood hal ar :. Waxa la $aban karaa shir aan %aadi ahayn arkay sidaas go-aa iyaan guddiga gobolka <. Ergooyinka ka $eybgalaya shirka waxaa laga soo dooranayaa laa aha gobolka =. 1irada guud ee ergooyinka shirka waxaa go-aa inaya guddiga gobolka+ iyagoo ku salaynaya hadba !irada ka diiwaan gashan xubnaha xisbiga >. 1irada ergooyinka laa aha iyo !irada ergooyinka ee garabka haweenka iyo garabka dhalinyarada ee heer gobol uga $aybgelaysa shirka waxaa go-aa inaya guddiga gobolka ?. Ergooyinka soo so%da si !oos ah ayey uga $eybgalayaan; a. 3uddiga gobolka b. Dha aan xubnaha xisbiga ee ugu &ira golayaasha deegaanka @. Marka laga reebo !irada guddiga gobolka+ ergooyinka kale waa inaysan ka yaraan !irada guud ee guddiga gobolka A. 0adhigiisa ugu horeeya wuxuu iska dhexdooranayaa shirgudoonka shirka oo ka kooban; shirgudoonka shirka+laba gudoo iyeBxigeen+ iyo xoghayaha shirka.
QODOBKA 34AAD M/#UULIY/D/ IY5 /W55D/4/ #4I2K/ XI#,I3/ EE 4EE2 35,5L
Marka laga reebo awoodaha kale ee das!uurka+ xeerarka iyo go-aa ada kale siinayaan+shirka xisbiga ee heer gobol wuxuu leeyahay asuuliyadan iyo awoodaha soo so%da; 7. Wuxuu door!aa xubnaha guddiga gobolka ee xisbiga 2. Wuxuu door!aa gudoo iyaha guddiga gobolka iyo laba gudoo iyeBkuBxigeeno oo kala ah koowaad iyo labaad. Waxaana loo raa%ayaa $aabka doorashada gudoo iyaha iyo ku xigeenada ee ku xusan Codobka 7@aad :. Wuxuu eel ariyaa go-aanada ka soo baxa golayaasha $aranka+ ka gobolka iyo kuwa guddiga )ulin!a
<. Wuxuu go-aa o ka soo saaraa warbixinada guddiga gobolka =. Wuxuu de&iyaa siyaasada iyo $orshayaasha guud ee xisbiga ee gobolka.
QODOBKA 35AAD 3UDDI3/ 35,5LK/ EE XI#,I3/
7. 3uddiga gobolku wuxuu ka kooban yahay <0 xubnood 2. 3udiga gobolku waxay so%odsiisaa hawlaha xisbiga ee gobolka in!a u dhaxaysa labada shirweyne :. 3uddiga gobolku wuxuu shiraa sannadkiiba saddex &eer <. 3uddiga gobolku wuxuu lahaanayaa guddi )ulineed oo ka kooban 7? xubnood =. #hirkooda u horeeya guddiga gobolku wuxuu ku dooranayaa; a. Xoghayaha xisbiga ee gobolka b. La%aghayaha gobolka. Mid kas!a xilkiisa waxa lagu !il aa ayaa xeerBhoosaadka xisbiga ee gobolka >. 3udoo iyaha guddiga gobolka wuxuu leeyahay dha aan awoodaha ku xusan Codobka 7AaadD arka laga reebo xubin!a 'e* ee isla $odobkaas+ iyadoo awoodiisu ku eg !ahay heer gobol ?. #hirarka guddiga gobolka waxa gudoosha gudoo iyaha guddiga gobolkaD hadii uu a$an yahayna waxa gudoonsha gudoo iyeBkuBxigeenka koowaad a a ka labaad+ hadii ay labada hore a$an yihiin.
QODODBKA 36AAD M/#UULIY/DD/ 3UDDI3/ 35,5LK/ EE XI#,I3/
Ka sokow awoodaha kale ee das!uurkanD xeerarka+ iyo go-aanada kale ee xisbigu siin karaan+ awoodaha guddiga gobolku waa sidan soo so%da;
7. Wuxuu )uliyaa go-aa ada gobolkaD ka golaha dhexe ee xisbiga iyo kan guddiga )ulin!a golaha dhexe 2. Wuxuu u gudbiyaa guddiga )ulin!a golaha dhexe iyo golaha dhexe ee xisbiga warbixinada shirarka gobolka iyo warbixin kas!a oo looga baahdo :. Waxay de&iyaan xeerBhoosaadka iyo go-aanada ku wa&ahan gobolka <. Waxay )uliyaan dha aan hawlaha xisbiga ee gobolka =. Wuxuu ku dhawaa$i karaa shir aan %aadi ahayn oo xisbiga ah ee heer gobol
>. Wuxuu aga%aabaa xilkana ka $aadi karaa; a. Xoghayaha b. La%aghayaha %. Madaxda kala duwan ee guddiga )ulin!a d. Xubnaha kale ee guddiga )ulin!a oo ah ? xubnood.
QODOBKA 37AAD 3UDDI3/ 0ULI.1/ XI#,I3/ EE 35,5LK/
7. 3uddiga )ulin!a xisbiga ee gobolku wuxuu ka kooban yahay 7? xubnood oo kala ah;
a. 3udoo iyaha guddiga gobolka b. 3udoo iyeBkuBxigeenka koowaad ee guddiga gobolka %. 3udoo iyeBkuBxigeenka labaad ee gobolka d. Xoghayaha gobolka e. La%aghayaha gobolka ). Madaxa abaabulka iyo war)aa)in!a g. Madaxa siyaasadda h. Madaxa xidhiidhka laa aha xisbiga ee gobolka i. Madaxa garabka haweenka ee gobolka &. Madaxa garabka dhalinyarada ee gobolka k. Iyo '?* !odoba xubin oo ka !irsan guddiga gobolka
2. #hirarka guddiga )ulin!a ee gobolka waxa gudoonsha gudoo iyaha guddiga gobolka goblka+ hadii uu a$an yahayna waxaa gudoonsha gudoo iyeBkuBxigeenka kowaad+ sidoo kalena gudoo iyeBkuBxigeenka labaad+ hadii labada horeba a$an yihiin
:. 4adii ay la soo gudboonaa!o gudoo iyaha a a kuBxigeenkiisa xaaladaha ku xusan Codobka 27aad ee das!uurka+ waxa la raa%ayaa isla $odobkaas habraa%a ku !il aa an.
QODOBKA 38AAD 4/WL/4/ 3UDDI3/ 0ULI.1/ XI#,I3/ EE 35,5LK/
Marka laga reebo hawlaha kale ee ay siin karaan das!uurkanD xeerarka a a go-aanada xisbiga+ guddiga )ulin!a ee gobolku wuxuu leeyahay hawlaha soo so%da;
7. Wuxuu )uliyaa hawl aal eedka guddiga gobolka 2. Wuxuu )uliyaa go-aanada guddiga gobolka :. Wuxuu eel ariyaa go-aanada iyo xeerarka kale ee heer $aran <. Wuxuu iskugu yeedhaa gudddiga gobolka shirarkooda %aadiga ah a a kuwa aan %aadiga ahayn 2. 3uddiga )ulin!u waa inuu kul aa !odobaadkii ugu yaraan hal ar.
QODOBKA 39AAD D4I#M/4/ XI#,I3/ EE 4EE2 DE3M5
7. #hirka xisbiga ee heer deg o waxa lagu soo dhisaa guddiga xisbiga ee heer deg o oo ka kooban 20 xubnood oo ay ku &iraan gudoo iye iyo laba gudoo iye BkuBxigeen koowaad iyo labaadD iyadoo la raa%ayo sida uu !il aa ayo Codobka 7@aad 2. #hirka xisbiga ee heer deg o waxa la $ab!aa sannadkiiba hal ar :. Laan kas!a oo deg ada ka !irsan waxay xa$ u leedahay inay ka soo $eybgasho shirkaas. 1irada ergooyinka uga $eybgelaya shirkaas waxa go-aa inaya guddiga deg ada + waxayna !iradu ku xidhan !ahay hadba in!a xubnaha xisbiga ee ka diiwaangashan laan!a <. #hirka deg ada waxa si !oos ah uga soo $eybgalaya guddiga deg ada ee xisbiga iyo xubnaha golayaasha deegaanka ugu &ira xisbiga =. 1irada ergooyinka ee garabka ahweenka iyo garabka dhalinyarada ee deg o uga $eybgelaya shirka waxa go-aa inaya guddiga deg ada >. 0adhigooda ugu horeeya wuxuu shirku iska dhex dooranayaa shirgudoonka shirka oo ka kooban shirBgudoo iyaha shirka iyo laba gudoo iye xigeen iyo xoghayaha shirka.
QODOBKA 40AAD M/#UULIY/DD/ IY5 /W55D/4/ #4I2K/ XI#,I3/ EE DE3M/D/
Marka laga reebo awoodaha das!uurkaD xeerarka iyo go-aa o kale siin karaan+ wuxuu shirka xisbiga ee deg adu leeyahay asuuliyadda iyo awoodaha soo so%da; 7. Wuxuu eel ariyaa go-aanada ka soo baxa goleyaasha $arankaD ka gudiga gobolka a a kuwa )ulin!a
2. Wuxuu go-aa o ka soo saaraa warbixinada gudiga deg ada :. Wuxuu door!aa xubnaha guddiga deg ada ee xisbiga <. Wuxuu door!aa gudoo iyaha guddiga iyo labada gudoo iyeBxigeen oo kala ah koowaad iyo labaad+ iyadoo la raa%ayo $aabka ku !il aa an Codobka 7@aad
QODOBKA 41AAD M/#UULIY/DD/ 3UDDI3/ DE3M/D/ EE XI#,I3/
7. 3uddiga deg ada ee xisbigu waxay so%odsiiyaan hawlaha xisbiga ee deg adda in!a u dhaxaysa laba shir ee deg o 2. 3uddiga deg adu wuxuu leeyahay guddi )ulin oo ka kooban sagaal 'A* xubnood :. #hirkooda u horeeya gudiga deg adu wuxuu door!aa; a. Xoghayaha xisbiga ee deg ada b. La%aghayaha xisbiga ee deg ada
<. 3udoo iyaha guddiga xisbiga ee deg adu wuxuu leeyahay awoodaha gudoo iyaha guddiga xisbiga ee gobolkaD iyadoo awoodiisu ku eg !ahay heer deg o =. 3udiga )ulin!a ee deg adu wuxuu ka kooban yahay; a. 3udoo iyaha iyo labada gudoo iyeBxigeen b. Xoghayaha %. La%aghaye d. Madaxaabaabulka iyo war)aa)in!a e. Madaxa garabka haweenka ). Madaxa garabka dhalinyarada g. Madaxa xidhiidhka laa aha deg ada
>. #hirka guddiga deg ada iyo kuwa guddiga )ulin!a waxa gudoonsha gudoo iyaha gudiga deg adaD hadii uu a$an yahana gudoo iyeBkuBxigeenka koowaadD hadii ay labaduba a$an yihiin gudBkuBxigeenka labaad ?. 4adii ay la soo gudboonaa!o gudoo iyaha a a ku xigeenadiisa xaaladaha ku xusan Codobka 27aad ee das!uurkaD waxa la raa%ayaa isla $odobkaas habraa%a ku !il aa an @. 3uddiga deg adu waxay awood u leeyihiin dha aan awoodaha gudiga gobolka+ ee ku xusan Codobka :>aad arka loo eego awoodaha heer deg oD wuxuuna shiraa bil kas!a A. 3uddiga )ulin!a ee deg adu waxay leeyihiin dha aan awoodaha guddiga )ulin!a ee gobolka ee ku xusan Codobka :@aad arka loo eego awoodaha heer deg o 70. 3uddiga deg ada ee xisbigu wuxuu door!aa usharixiin!a xisbiga uga $eybgelaysa doorashada golaha deegaanka.
QODOBKA 42AAD L//M/4/ XI#,I3/
7. Laan!u waxay saldhig u !ahay asaaska xisbigaD waana halka uu kasoo unka o xubnaha xisbigu 2. Xubin kas!a oo xisbiga ka id ahi waa inay ka diiwaan gashan !ahay laan :. Laan kas!a waxa laga diiwaangelinayaa deg ada ay ka !irsan !ahay <. Laan kas!a waxay leedahay guddi laga soo door!ay shirka xubnaha xisbiga ee laan!a oo la $ab!o sannadkiiba hal ar+ wuxuuna shirka xisbiga ee laan!u leeyahay dha aan awoodaha shirka xisbiga ee deg ada ee ku xusan Codobka <0aad =. 3uddiga laan!u waxuu ka kooban yahay 7= xubnood oo ay ku &iraan 3udoo iyaha iyo laba gudoo iye xigeen ? '!odoba* ka id ah guddigu !ahay guddiga )ulin!a oo kala ah; a. 3udoo iye b. Laba gudoo iyeBxigeeno+ kala ah koowaad iyo labaad %. Xoghaye d. La%aghaye e. Madaxa abaabulka iyo war)aa)in!a ). 4al xubin oo ka !irsan guddiga laan!a
>. Kulanada xisbiga ee laan!a waxaa looga doodaa wax$abadka xisbiga ee laan!a ?. 3uddiga xisbiga ee laan!u waxuu so%odsiiyaa hawlaha xisbiga ee laan!aD wuxuuna asuul ka yahay dha aan awaa iir!a iyo go-aanada kaga yi aada deg o ilaa gobol @. 4awlaha guddiga )ulin!a ee laan!u waxay leedahay dha aan hawlaha guddiga )ulin!a ee deg adaD wuxuuna kul aa !odobaadkiiba ugu yaraan hal ar A. 3uddiga laan!u wuxuu leeyahay dha aan awoodaha guddiga xisbiga ee deg ada ee ku xusan Codobka <7aadD wuxuuna shiraa bil kas!a 70. 3udoo iyaha guddiga xisbiga ee laan!u wuxuu leeyahay awoodaha gudoo iyaha guddiga xisbiga ee deg ada.
QODOBKA 43AAD L//M/4/ XI#,I3/ EE DI,EDD/
7. Laa aha xisbiga ee dibeddu waxay lahaan doonaan $aabBdhis eed u gaar ah oo ay ku soo saaraan xeerBhoosaadka 2. CaabBdhis eedkooda waa in lagu !il aa aa xarun kul isa laa aha dibedda.
QODOBKA 44AAD C5D5,5 K/L/ DUW/. /.#/X#/.//.1/ 0/D4IY/D/ IY5 35-//./D/ XI#,I3/
7. 0adhiyda iyo kulanada xisbiga waxa la $aban karaa arka ay &oogaan kala badh in ka badan !irada xubnaha golaha a a guddiga 2. 3o-aanada golaha a a guddigu waxay ku ansax aan %od hal dheeri ah xubnaha &ooga 'a$labiyad )udud*+ arka laga reebo xaaladaha das!uurkan a a xeerB hoosaadyada xisbigu ay &ideeyeen a$labiyad ka duwan.
QODOBKA 45AAD 65D,IXI.1/ XU,./4/
7. 0adhiyada a a kulanada xisbiga+ xubnaha xisbigu waxay %odkooda ku dhiibayanayaan si adax bananaD iyadoo xubin kas!a leedahay hal %od 2. 6odbixin!a )adhiyada a a kula ada xisbiga waa ga%an!aagD %od bixin $arsoodi ah waa la sa ayn karaa hadii uu sidaa &ideynayo xeerBhoosaad :. 3udoonshaha )adhiga a a kulanku wuxuu %odkiisa dhiibanayaa arka u danbeysa ee %odbixin!a xubnaha <. 4adii ay sin aan %odadka xubnahuD gudoonsha )adhiga a a kulanku wuxuu lahaanayaa %odBdheeri.
QODOBKA 46AAD X/LLI.1/ XU23U0/4/
7. Xubin kas!a o xisbiga ka id ahi waxay xa$ u leedahay inay ku doodo in das!uurkiiD xeerarkii+ go-aanadii a a xeerBhoosaadyadii xisbiga la &ebiyey 2. 4adii !irada xubnaha da%woonaysaa gaadhsiisan yihiin 20 xubnoodD gudoo iyaha xisbigu waa inuu $aderiyaa da%wadaas una aga%aa guddi baadhis ahD iyadoo gudigaas la siinayo awoodaha iyo habkay ku sha$eyn lahaayeen :. 3uddiga la ig aday ee ku !il aa an xubin!a hore+ go-aanka ay soo saaraan wuxuu no$onayaa ka a danbeys.
QODOBKA 47AAD /.#4/X M/2I.1/
7. Marka laga reebo )alalka kale ee danbi %i$aabeed dhalin kara+ xubin kas!a oo xisbiga ahi waxa la saari karaa !alaabo anshax arinD hadii uu ku xad gudbo das!uurka xisbigaD xeerarkaD go-aanada a a xeerBhoosyada xisbiga
2. Waxa awood u leh $aadida ge)ka ee xubin!a+ guddiga )ulin!a ee heer xisbi ee xubin!u ka hawlgasho :. Xubin!a waa in $oraal lagu siiyaa da%wada ge)ka loo hays!o ugu yaraan 70 %isho aal ood ka hor+ aalin!a da%wad $aadis!a
<. 3anaaxu wuxuu ahaan karaa; a. Digniin %anaan $oraal ah b. 3anaax la%ageed oo aan ka badnayn #L.#4. saddex bo$ol oo kun %. In laga soo %eliyo shahaadoD bilad a a $ii ayn+ waxa awood u leh %ida bixisay ee ah golahaas a a guddigaas.
QODOBKA 48AAD /,//L M/2I.1/ XI#,I3/
7. Xisbigu wuxuu lahaanayaa abaal arino kala duwan oo kala ah; a. ,ilada xisbiga heer $aran b. #hahaado shara) %. Iyo a aan
2. /baal arin!aas xisbigu waxay ahaan kar!aa id heer $aran ahD heer gobolD deg o iyo Laan :. ,illada waxa lagu bixin karaa keliya heer $aran <. /baal arin!a xisbigu heer kas!a oo ay !ahay waxa la siin karaa xubin kas!a oo ka !irsan xisbiga oo u!aysa!a hawkarni o dheeraad ah a a wax$abad uu$da oo xisbiga u soo hoysay guul
=. ,ixin!a abaal arinahaas+ waxa awood u leh; a. Markay heer $aran !ahay gudoo iyaha xisbiga+ ka dib arkay sidaas go-aa iyaan golaha dhexe ee xisbigu b. Markay !ahay heer gobolD heer deg o iyo heer laan+ gudoo iyaha guddiga ka dib arkay sidaas go-aa iyaan guddiga gobolka+ deg ada a a laan!u.
QODOBKA 49AAD W/XBK/B,EDELK/ D/#1UU2K/
7. Das!uurka waxa wax ka bedeli kara shirweyne $aran 2. Waxa soo &eedin kara waxBkaBbedelka das!uurka; a. 4adii ay soo &eediyaan guddiyadda goboladdu !iro saddex gudi gobol b. 4adii ay soo &eediyaan 7E< 'a)ar eeloodB eel* !irada xubnaha golaha dhexe %. WaxBkaBbedelka das!uurka waxa lagu ansixin karaa a$labiyad ah 2E: 'saddex eeloodBlaba eelood*.
QODOBKA 50AAD M/C//MK/ D/#1UU2K/ XI#,I3/
7. Das!uurka xisbiga ayaa ah ka ugu sareeya dha aan xeerarka iyo go-aanada xisbiga 2. Xeer kas!aD go-aan kas!a iyo xeerB hoosaadka kas!a ee xisbiga oo ka soo hor&eeda das!uurkan xisbiga waa waxba ka a &iraan.
QODOBKA 51AAD /.#IXI.1/ IY5 D4/C/.B3/LK/ D/#1UU2K/.
7. Das!uurkan waxa lagu ansixin karaa 2E: + waxna looga bedeli karaa 'saddex eeloodBlaba eel* !irada guud ee shirweynaha 2. Wuxuu dha$an gelayaa das!uurkani isla arka shirweynuhu ansixiyo
QODOBADA WAQTIGA KALA-GUURKA
QODOBKA I XILLIGA KALA-GUURKA
7. Codobadan kala guurku waxay sha$eynayaan xilliga uu ururka Kul iye higsanayo xisbini ada+ ee uu yahay ururka oo ah in!a ka horeysa wakh!iga doorashada golayaasha deegaanka ee dawladaha hoose
QODOBKA II KU D!AQA"KA DASTUURKA"
7. Ururka kul iye arka uu urur yahay iyo dha$ ayaa das!uurkan.
arkuu xisbi yahayba wuxuu ku
QODOBKA III #IDOWGA URURADA
7. Ururku wuxuu la idoobi karaa ururo kale oo siyaasi ah oo ay isku u&eedo yihiinD hadii uu sidaa banaynayo xeerka axsaab!u waxaana awood u leh 3olaha dhexe 2. Xaaladaas oo kale+ golaha dhexe wuxuu awood u leeyahay inuu ku dhawaa$o shirweyne xisbi oo aan %aadi ahayn hadii ay laga a aar aan !ahay.
QODOBKA I$ ERGOOYI"KA S!RWEY"A!A
7. Marka la &oogo wa$!iga kalaBguurka+ !iradad ergooyinka shrweynaha ee ku xusan Codobka 7=aad xubin!iisa '<*+ waxaa go-aa inaya guddiga )ulin!a golaha dhexe ee ku eelgaadhka ah+ iyadoo ergooyinku ku i anayaan saa iyo ku salaysan gobolo.
QODOBKA $ GOLA!A D!EXE
7. Marka la &oogo wakh!iga kalaguurka+ doorashada xubnaha golaha dhexe ee ku xusan Codobka 22 xubin!iisa 2aad+ shirweynuhu wuxuu ku ansax ayaa xubnaha golaha dhexe liis saa iyo ku dhisan gobolo+ oo ay soo &eedinayaan shirgudoonka shirweynuhu.
QODOBKA $I GUDDIGA FULI"TA EE KU-#EEL-GAAD!KA A!
7. Dha aan gobolada dalka waxaa ururku kasii dhisayaa guddi )ulin oo ku eelgaadh ah+ oo wada hawlaha xisbiga ee gobolka 2. 3uddiga )ulin!a ee ku eel gaadhka ahi+ wuxuu lahaanayaa dha aan awoodaha guddiga gobolka ilaa in!a xisbigu iska soo dhisaayo heer laan iyo heer deg o.
#/XEEX/ #4I23UD55.K/ #4I2WEY./4/
:.3UD55MIYE XI3EE.K/ L/,//D